Xulka DR Congo oo Ku Soo Baxay Kaalinta Sedaxaad ee koobka Qaramada Afrika – Radio Muqdisho
Xulka DR Congo ayaa ku soo baxay kaalinta sedaxaad ee koobka qaramada afrika,ka dib markii uu rigoorayaal 4-2 ah uga badiyay xulka Equatorial Guinea oo marti galinayo koobka.
Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Estadio de Malabo ayaa waqtigii loogu tala galay waxa ay ku dhamaatay bareejo 0-0 ah.
Garoonka Estadio de Malabo ma joogin taageerayaal badan,maadaama taageerayaasha xulka Equatorial Guinea ay qalalaaso sameeyeen ciyaartii Semi-finalka ee dhex martay dalka marti galinayo koobka iyo xulka Ghana.
Koobka qaramada afrika ayaa habeen danbo la soo gabagabeyn doonaa,waxana ciyaarta kama dambeysta ah ciyaari doono xulalka Ghana iyo Ivory Coast.
Waa booskii ugu fiicnaa oo uu xulka DR Congo ku dhameysto koobka qaramada afrika ilaa sanadkii 1998-dii.